Maitiro Ekuvandudza iyo WordPress Chiitiko Sidebar kubva kuICal uchishandisa Google Calendar (uye imwe Google Kunakidzwa!) | Martech Zone
Chitatu, July 30, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Vhiki rino ndakasaina saiti yangu yega kukwira Google Apps. Ndanga ndichiwana gomo reSpam sezvo email yangu kero isina kuchinja mumakore uye muenzi wangu (kunyangwe ndichivada) vachabhadharisa $ 1.99 paemail kero yeSpam Dziviriro, chimwe chinhu icho Gmail inoita mahara. Zvakare, neGmail, urikushanda nemaalgorithms akavakwa nemamiriyoni evamwe vashandisi saka zvakanyatsoita!
Google Taura Bheji
Pave paine mamwe mabhenefiti ekuenda kuGoogle Apps izvo zvandisina kuziva, zvakadaro! Chekutanga kugona kubatanidza Google's Instant Messaging application, inonzi Taura, yakananga padivi rangu repaseri kuburikidza ne Google Taura Bheji.
Zvakare, ini zvino ndave ne Google Notifier, iyo inondinyevera kana ndiine email uye, kubva nhasi, inosangana neGoogle Apps uye inondinyevera kana ndiine zviitiko zvekarenda futi. Icho chikumbiro chidiki.
Google Karenda iCal Kubvumirana
Zvichida nhau hombe svondo rino yaive apo shamwari yangu, Bill, paakatumira nezve Google Calendar rutsigiro rweCalDav uye kugona kuwiriranisa iCal neGoogle Calendar. Zviri nyore.
Vhura iCal Zvaunoda
Pinda yako Google Email Kero nePassword
Isa kero yako yeKarenda:
Ini ndanga ndisingade kugovera yangu yekutanga khalendari pane yangu WordPress sidebar, saka ini ndakawedzera imwe Calendar kuGoogle Calendar yangu uye ndokuzoiwedzera kuICal futi. Pane madhairekitori ekubatanidza makarenda ako echipiri neICal. Ingori URL yakasiyana.
Google Calendar WordPress Kubatanidzwa
Nhanho yekupedzisira kuisa iyo Google Calendar WordPress plugin kuwedzera widget kune yako Sidebar iyo inopfuura uye inoratidza zviitiko kubva kuKarenda yako. Kune mamwe nuances neiyi plugin, zvakadaro, izvo zvinofanirwa kutarisirwa kune:
Sign up a Google Dhata API Kiyi, iwe unozoida iyo kuti ipinde mune izvo zvePlug's masetingi.
Paunopinda kero yeXML yekudya kweKarenda yako, ita shuwa kuti unotsiva iyo yekupedzisira node yeiyo url ne 'yakazara' kuitira kuti kero iratidzike seiyi:
zuvaString = kuratidzaTime.toString ('dddd, MMMM dd, yyyy');
Musoro wewidget hauna kuratidzwa zvinoenderana neWordPress API uye default widget mashandiro. Mumwe munhu aive akanaka zvakakwana kuti atumire kururamisa kweizvi muGoogle Code asi haisati yasunungurwa. Heano mafambiro pane iyo kodhi kune chinja kugadzirisa nyaya dzewidget.
Neichi chakazara chakabatanidzwa, ini zvino ndogona kushandisa Google Notifier kana iCal uye kuwedzera chiitiko chinozoratidza padivi rangu! Iyo nguva yenguva yainotora inoenderana nematanho ako ekugadzirisa pakati peICal neGoogle.
Tags: karendagoogle kalendariiCalWordPress
Kurudziro yeBhizinesi Kadhi?
Kukadzi 11, 2009 na11:53 PM